मनोरञ्जन - Jankari Nepal
राइजिंग स्टार मेलिना मैनालीको “तिमी छौ र” गित युटुवको ट्रेन्डिङमा (भिडियो सहित)
Post date ९ असार २०७८, बुधबार ०७:०२
एस.एस. पटेल, बारा । राइजिंग स्टार मेलिना मैनालीको नँया गित “तिमी छौ र” गितको भिडियो युटुवको ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको छ । कमल खत्रीको “तिमी छौ र” गितलाई मेलिनाले फिमेल भर्सनमा गाएकिहुन । मेलिनाको एक पछि अर्को गित फेस्बुक देखि युटुवमा निकैनै राम्रो मार्केट लिरहेको छ । राइजिंग स्टार मेलिना मैनालीको पछिलो गित “फिका” पनि […]
चर्चित हास्य कलाकार कामेश्वर चौरसियाको “बाबा चण्डी बस” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
Post date ६ असार २०७८, आईतवार १०:३६
एस.एस. पटेल, चर्चित हास्य कलाकार कामेश्वर चौरसियाको “बाबा चण्डी बस” सार्वजनिक भएको छ । चौरसियाको “बाबा चण्डी बस” विश्व भरी एकसाथ युटुव मार्फत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोमा कमेडिले भरिएको डाईलग र स्टोरी छ । भिडियोमा पहाडमा वर्षौ देखि स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत एक स्वास्थ्य कार्मी जस्लाई एक बूढो मान्छेले बिना कसुर झुटो […]